Sida loo arko boqolleyda batteriga ee ku jira iPhone X | Wararka IPhone
The "notch" ee cusub ee iPhone X shaki la'aan waa wax aan la iska ilaalin karin maadaama ay ku jiraan kamarad labalaab ah iyo dareemayaal, tani waa wax shaki la'aan xaddidaya muujinta astaamaha aan ku haysanno shaashadda dusheeda iyo kiiska batteriga ku yaal dhinaca midig ayaa noo oggolaanaya arag astaanta kaliya ee «xidhmooyin» oo aan lahayn boqolkiiba tirada.
Marka waxaan eegeynaa siyaabaha ay tahay inaan u awoodno inaan aragno shaxdan oo midka kaliya ee jira uusan caadi ka ahayn iPhone-ka. Waana sida caadiga ah ikhtiyaarka aan hadda ugu firfircoon nahay dhammaan iPhones marka laga reebo nooca XNUMX-guurada ayaa ah helitaanka Dejinta> Batariga oo dhaqaajiso boqolleyda batteriga, lambarku wuxuu ka muuqanayaa shaashadda waana intaas. Xaaladda iPhone X tani macquul maahan meesha oo kooban, laakiin waxaan si dhaqso leh oo fudud u arki karnaa shaxdan.
Sida loo arko boqolleyda bateriga ee iPhone X
Hagaag, inaad aragto boqolleyda batteriga ee kujira iPhone X-ga cusub waa mid fudud sida helitaanka Xarunta Xakamaynta. Waayo, waa inaan hoos uga laabannaa geeska midig ee kore shaashadda wax yar ka koreysa astaanta batteriga iyo boqolkiiba dhabta ah ee batteriga haray waxay ka muuqan doonaan tirooyinka. Uma baahnin inaan wax ka dhaqaajino, si fudud Xarunta Xakamaynta.
Tani waa sidaas umana muuqato inay wax iska beddeleyso mustaqbalka dhow, laakiin ma diidno in Apple ku dari doono ama ka fekerayo inuu si toos ah ugu daro suurtagalnimada beddel astaanta batteriga illaa astaanta boqolleyda. Waxaa macquul ah in JAILBILYS ay tani suuragal tahay, laakiin mabda 'ahaan waan iska tuurnay wixii na siiyay sannado badan ka hor.
Sababta aynaan u haysan ikhtiyaarka aan ku darsano labada astaamo isla waqtigaas waa iska cadahay: la'aanta boos jireed. Waana in shaashadda calaamadda cusub ee Apple ay leedahay tabkan loo yaqaan 'notch' kaas oo ka hortagaya in lagu daro astaamaha sida iPhone 8, 7, iwm. Mar kasta oo aan dooneyno inaan aragno boqolleyda, waa inaan galnaa Xarunta Xakamaynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Sida loo arko boqolkiiba batteriga ku yaal iPhone X
IPhone X ayaa laga heli karaa 14 dal oo cusub laga bilaabo Nofeembar 23